Ndingavandudza sei SEO yangu nekugadzirisa rakaputsika redirect backlinks?
Hungu, zvinokwanisika kupa kukurudzira kwakanakisisa kuedza kwako kwose muna SEO - kungoita nekugadzirisa hutano hwako hwave huripo uye kushandiswa kwekudzosa zvakare kumashure. Sei? Zvakanaka, ngationei.
Zvikonzero Zvitanhatu Zvikuru Zvokudzikinura Zvisungo:
1. Unogona kutora zvakakwana pamusoro pesarudzo yekushandiswa kwayo (kusiyana nemugove weshumba weimwe basa, somuenzaniso sehuwandu hwekukurudzira);
2. Kugadzirisa kuputsika kwehukama, haugoni kukurudzira tsvaga yako yekutsvaga asi kuwana zvakawanda zvezvimwe zvakavanzwa (e. g. , zvakanakisisa user user experience);
3. Muchaita zvakanyanya zvekuedza kwamakambobata nawo.
Tichifunga kuti shanduro yose yakatorwa pamwero ingaratidza kuti inopesana ne-intuitive uye inogona kuoma kuti itarisirwe zvakanaka, heino mhedziso shoma yezviito kuti uite nenzira yakarurama:
Tsvaga dzose dzakaputsika zvingano iwe pawebsite yako kana blog.
Vaparadzanise nevakuru ekudzokorora maitiro.
Shandisa paIndaneti chivakwa chivakwa uye chishandiso chekubatsira kunyora kurongedza.
Pedzisa mabasa ako nekudzorera shure kumashure uye uve nekutarisa.
Kuziva Kuvhurika Zvisungo
Ngatitaure zvakare zvakare - tichaenda kutarisa zvakare kutumira shure kumashure kunotungamirira nzira yekuputsika mapeji mukati pewebsite yako. kana blog. Nenzira iyo, iwe uchada kuwana sarudzo inokosha yadzo pamusoro pavo-uchishanda neGoogle Search Console, kana chero shandiso yakakosha yekubatsira paIndaneti yemashoko akawanda zviri nani uye akajeka, zvakadai seOver Site Explorer (Moz), Semalt Analyzer (Semalt), kana Kurira Frog SEO spider. Mushure mezvose, zvinongova kwauri iwe chete kuti usarudze hurongwa hupi hunosarudza basa iroro.
Kuita izvi, yeuka - iwe uchafanirwawo kugadzirisa zvese zvakaputsika zviri mukati mako pawebsite yako kana bhurogi, sezvo zvichigona kunge kune dzakawanda URL dzakapinda mumakore achangopfuura. Saka, zvose zvaunoda zviri kugadzirira basa rakawanda uye rinowanzoshanda nguva - uchishandisa Google Search Console kuti udzoke zvakare kumashure. htaccess kana purojekiti chaiyo kana uri kushandisa WordPress. Kana iwe unogona kukurumidza kudzorerazve hukama hwakawanda hunoda kugadziriswa - kungoshandisa imwe yevabatsiri vepaIndaneti vakambotaurwa.
Kuparadzanisa URL neRedirect Patterns
Sekushandura paShokoPress, ndaitarisira kuti ndizive maitiro angu ekare e URL (somuenzaniso, kuuya semuzinda + wegore + mwedzi. html), uye mitsva yeEUR maitiro (e. g. , domain + post name). Kuisa muChirungu Chisinganzwisisiki, uchada kunyora mirayiridzo inokosha yeGoogle yekukwezva bhova ichivaudza pamusoro peizvi kana zvimwe zvingagadziriswa zvachose - zvose mu URL pachayo, uye neji HTML peji (zvisinei, shandisa 301 redirects).
Kana ini, ndakashandisa Permalink Helper Tools kushandisa ne code URLs. Zvose zvinofanira kuva zvitsanangudzo ipapo, asi yeuka kuva neIndaneti inofanirwa sey URL inotanga neimba yako, inoteverwa nenhamba uye slash, kuti ipedzwe nemakore akasiyana kubva kuShokoPress, uye nhamba mu HTML inopona munguva. Yeuka kuti kushanduka kunofanira kugara kwakatanga uye kwakaguma nechisimba.
Dzorera zvakare Redirect Backlinks uye Chengeta
Kuzadzisa nzira yacho. htaccess faira nemutsetse kuburikidza neFTP mutauro ne server yako. Chenjerera - iva nechokwadi chokuti zvose zviri munzvimbo. Ndinoreva kuti kutonga kusvika kune webhusaiti yako kana blog. Htaccess, kana chimwe chinhu chisina kuipa iwe unogonawo kuparadza zvose - kunyange nekodhi kanochera. Nenzira iyo, zvose zvaunoda ndezvekupatsanurudza kwako zvakare kuNje uye Target, shandisa nzira yekuchechedza nechakugadzirisa - uye wapedza!
Zano: nzira imwechete inogona kushandiswa pakaputsika mukati mehuni pamwe chete. Zvechokwadi, zvakakodzera kuti havafaniri kudarika chero mararamiro, asi nhamo, haisi nguva dzose inogoneka. Yeuka - kuva nekunyorera zvakare kunopfuura 404 Source .